SAWIRRO: Ciidanka Xoogga oo gargaar caafimaad u fidiyay shacabka ku nool Moordiinle
Moordiinle (Horumar Online) – Ciidamada Xoogga dalka oo tagay Deegaanka Moordiinle ee hoostaga Deegaanada Sabiib iyo Canoole ayaa shacabka ku dhaqan deegaanka u geybiyay daawooyin caafimaad xilli dadka ay ka cabanayaan xaalado caafimaad daro.
Dhaqaatiir ka socota Ciidanka Xoogga dalka ayaa sidoo kale xog wareysi caafimaad la yeeshay dadka jilicsan ka dibna qaar baaritaano gaar ah u sameeyay.
Dhaqaatiirta Ciidanka Xoogga dalka ee Baaritaanka caafimaad u sameynayay shacabka ku dhaqan deegaanka Moordiinle ayaa sheegay in mudo 7-sano ah cadowga ay shacabka ku hayeen cadaadis una diideen wax kasta oo nolosha oo asaasiga u ahaa.
Shacabka ayaa soo dhoweeyay gargaarka caafimaad ee ay ka heleen ciidanka Xoogga dalka,waxayna ku ilaabeen dhibaatadii ay kala kulmeen maleeshiyada Al-Shabaab.
Geesta kale, Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha hoose Ibaahim Aadan Cali Najax ayaa kormeeray furumaha hore ee ciidanka Xoogga dalka ay lu leeyihiin deegaanada Sabiib iyo Caanoole si loo dhiira geliyo ciidanka loogana Difaaco cadowga iney dhacabka dhibaateeyaan.
Najax oo la hadlay warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in ciidanka ay u diyaarsan yihiin sidii haraadiga maleeshiyada Al-Shabaab looga sifeyn lahaa guud ahaan Gobolka Shabeelaha Hoose.
Tags: #caafimaad #Ciidanka Xoogga dalka #gargaar #Shabeellaha Hoose
Previous Post War-murtiyeed: Maxay ku heshiiyeen maamullada Puntland, Hirshabelle iyo K/Galbeed?
Next Post BAAQ: Dallada SONSA oo Baaq kasoo saartay Shirkii Garoowe, Puntland